လက်ပ်တော့ပေါ်ကီးဘုတ် CONFIGURE လုပ်နည်း - WINDOWS ကို - 2019
က touchpad ကိုမရှိဘဲလက်တော့စိတ်ကူးဖို့ခက်ရဲ့သဘောတူသည်။ ဒါဟာသာမန်ကွန်ပျူတာမောက်စ်တစ်ဦးပြီးပြည့်စုံသော Analog စပါဝင်ပါသည်။ မည်သည့်အရံပစ္စည်းနှင့်ဝသကဲ့သို့, ဒီဒြပ်စင်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျရှုံးနိုင်ပါ။ ထိုသို့အစဉ်မပြတ်ကိရိယာ၏ကျရှုံးအတွက်ကိုထင်ရှားစွာပြမထားဘူး။ တစ်ခါတစ်ရံအနည်းငယ်အမူအရာငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ဤဆောင်းပါး၌သငျသညျကို Windows 10 အတွင်းကျိုးပဲ့ function ကို touchpad ကို scrolling မနှင့်အတူထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှအတိအကျဘယ်လိုသင်ယူရလိမ့်မယ်။
scrolling မ touchpad ကိုအတူပြဿနာကိုဖြေရှင်းဘို့နည်းလမ်းများ
ကံမကောင်းစွာပဲအဆိုပါစာစောင်ကိုစစ်ဆင်ရေး restore လုပ်ဖို့အာမခံကြောင်းမျှတစ်ခုတည်းနဲ့တစ်လောကလုံးနည်းလမ်းရှိသေး၏။ ဒါဟာရှိသမျှသည်အများသောအချက်များနှင့်တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သို့သော်ကျနော်တို့အများဆုံးကိစ္စများတွင်ကူညီသုံးခုအဓိကနည်းလမ်းများဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအခါသူတို့ကိုအကြားတစ်ဦးဆော့ဖ်ဝဲကိုဖြေရှင်းချက်နဲ့ hardware နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်မှဆက်လက်ဆောင်ရွက်။
Method ကို 1: အဆိုပါတာဝန်ရှိသူတဦးက software ကို
ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းက touchpad ကိုစာစောင်ကိုအင်္ဂါရပ်အပေါ် enabled ဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိစစ်ဆေးပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်တရားဝင်အစီအစဉ်ပြန်လည်ကုရှိရမည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, Window 10, အလိုအလျောက်အားလုံးဒရိုင်ဘာနှင့်အတူ install လုပ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ တချို့အကြောင်းပြချက်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့ဘူးလျှင်မူကား, ထို့နောက်သင်ထုတ်လုပ်သူများမှ touchpad ကိုအဘို့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် software ကို download လုပ်ပါဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခု generalized ဥပမာအတူအောက်ပါလင့်ခ်မှာတှေ့နိုငျပါသညျ။
အသေးစိတ်: ASUS ကလက်တော့ပ်များအတွက် touchpad ကိုယာဉ်မောင်း Load
သငျသညျအောကျပါလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆော့ဖ်ဝဲကို install ပြီးနောက်:
ကီးဘုတ် shortcut ကိုနှိပ်ပါ "ကို Windows + R ကို"။ တစ်ဦးကပြတင်းပေါက်စနစ် utility ကိုမှပေါ်လာပါလိမ့်မယ် "Run ကို"။ ဒါဟာအောက်ပါ command ကိုရိုက်ထည့်ရန်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်:
ထိုအခါကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အိုကေ" တူညီသောပြတင်းပေါက်၌တည်၏။
ထို့ကြောင့်ဖွင့်လှစ် "Control Panel ထဲက"။ ဆန္ဒရှိလျှင်၎င်း၏ startup တခြားနည်းလမ်းကိုသုံးစွဲဖို့ဖြစ်နိုင်သော။
Read more: Windows 10 ကိုအတူကွန်ပျူတာပေါ်မှာ "Control Panel ထဲက" ၏ဖွင့်ပွဲ
ထို့ပြင်ငါတို့သည်သင်တို့ Display ရဲ့ mode ကိုလှန်သောအကြံပြု "အကြီးစား Icons"။ ဤသည်လျင်မြန်စွာလိုအပ်သောအပိုင်းကိုရှာဖွေကူညီပေးပါမည်။ ၎င်း၏အမည်လက်ပ်တော့၏ထုတ်လုပ်သူများနှင့် touchpad ကိုအပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုမှာ, "ASUS ကစမတ်လက်ဟန်"။ လက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ်နှင့်အတူတစ်ချိန်က၎င်း၏အမည်ကိုပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
ထိုအခါသင်သည်ရှာဖွေအမူအရာ setting များအတွက်တာဝန်ရှိသော tab ကို, သှားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာစာလိပ် function ကိုရည်ညွှန်းသောလိုင်းကိုကြည့်ရှုပါ။ က disabled ခဲ့သည်ဆိုပါက enable နှင့်သင့်ပြောင်းလဲမှုများကို save လုပ်ပါ။ ကပေါ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်လျှင်, ပိတ်ခြင်းကြိုးစားကြ settings ကို apply, ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်။
ကျနော်တို့သာအစာလိပ်စစ်ဆင်ရေးကိုစမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။ အများဆုံးအခြေအနေများတွင်ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ရပ်များပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကူညီပေးပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်နောက်တစ်နေ့နည်းလမ်းကိုကြိုးစားကြည့်ပါ။
Method ကို 2: အဆိုပါ software ကို switch ကို-off
ကအတော်ကြာခွဲပစ္စည်းများပါဝင်သည်ကတည်းကဤနည်းလမ်းကိုအလွန်ကျယ်ပြန့်သည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်အရယာဉ်မောင်းပြန်လည်, BIOS ကို setting များကိုပြောင်းလဲနေတဲ့၏ပါဝင်မှုကိုရည်ညွှန်းသည်, ထိုစနစ်၏ parameters တွေကိုနှင့်အထူး key ကိုပေါင်းစပ်အသုံးပြုခြင်းကိုပြောင်းလဲ။ ကျနော်တို့အရင်ကအားလုံးအထက်ပါပစ္စည်းများပါဝင်သောဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးထားပြီ။ ထို့ကြောင့်, သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံး - အောက်က link ကိုသွားပြီးပစ္စည်းနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ဖြစ်လာသည်။
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ: မှာ Windows 10 မှာ TouchPad Enable
ထို့ပြင်အချို့သောဖြစ်ရပ်များတွင်၎င်း၏နောက်ဆက်တွဲတပ်ဆင်ခနှင့်အတူ banal ဖယ်ရှားရေးကိရိယာကကူညီနိုင်သည်။ ဒါဟာအလွန်ရိုးရှင်းစွာပြုမိသည်:
မီနူးပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ "Start" ညာဘက်မောက်စ်ခလုတ်ကို, ပြီးတော့ပေါ့ပ်အပ် menu ကနေ select လုပ်ပါ "Device Manager".
လာမယ့် window ထဲမှာသင်ကသစ်ပင်-စာရင်းကိုမြင်လိမ့်မည်။ ယင်းကိုရှာဖွေ "ကြွက်တွေကနှင့်အခြား point devices များ"။ ဒါကြောင့်ဖွင့်ပါနှင့်အနည်းငယ် Point devices များလျှင်, touchpad ကိုရှာပါ, အဲဒီနောက် PCM ၏နာမတော်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၌, လိုင်းပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ "ဟုအဆိုပါ device ကို Remove".
ပြတင်းပေါက်၏အပေါ်ဆုံးမှာ Next ကို "Device Manager" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "လှုပ်ရှားမှု"။ ထိုအခါလိုင်းကို select "ဟာ့ဒ်ဝဲအပြောင်းအလဲများကိုစကင်ဖတ်".
ရလဒ်အဖြစ်အဆိုပါ touchpad ကိုစနစ်ဖို့ re-connected ဖြစ်လိမ့်မည်နှင့် Windows 10 ထပ်လိုအပ်သော software ကို Install လုပ်။ ဒါဟာစာလိပ် function ကိုနောက်တဖန်အလုပ်မလုပ်လိမ့်မည်ဟုယူဆရသည်။
Method ကို 3: သန့်စင်အဆက်အသွယ်
ဤနည်းလမ်းကိုဖော်ပြထားအပေါင်းတို့၏အရှုပ်ထွေးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ငါတို့လက်တော့ Motherboard ကပေါ် touchpad ကို disable လုပ်ဖို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှုနျးပါလိမ့်မယ်။ အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များအဘို့, ကွင်းဆက်ပေါ်တွင်အဆက်အသွယ်ဤအရပ်, ထို touchpad ကို၏ပျက်ကွက်အောက်ဆီဒိုက်သို့မဟုတ်ရိုးရိုးကွာရွှေ့နိုင်ပါတယ်။ အခြားအမှုနည်းလမ်းများမကူညီကြဘူး, နှင့်ကိရိယာ၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကျရှုံးအပေါ်သံသယရှိပါတယ်လျှင်သင်တို့ရှိသမျှသည်တစ်ခုတည်းသောအောက်ပါလုပ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းသတိပြုပါ။
ကျနော်တို့ကထောက်ခံချက်များအကောင်အထည်ဖော်မှုစဉ်အတွင်းပေါ်ထွန်းစေမည်အကြောင်းပြဿနာများအတွက်တာဝန်မဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။ အားလုံးလုပ်ဆောင်ချက်သင့်ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာဖြစ်တယ်, ဒါသငျသညျမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစ၌မယုံလျှင်, အတတ်ပညာရှင်များမှဖွင့်ဖို့ သာ. ကောင်း၏။
ဥပမာအတွက် ASUS ကလက်ပ်တော့ကိုအောက်တွင်ပြသပါလိမ့်မည်သတိပြုပါ။ သင်သည်အခြားထုတ်လုပ်သူများထံမှကိရိယာရှိပါကတည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ကွဲပြားပါလိမ့်မယ်နိုငျသညျ။ ဘာသာရပ်လမ်းညွှန်မှကိုးကား, သငျသညျကိုအောကျတှငျတှေ့ရပါလိမ့်မယ်။
သာ touchpad ကို၏အဆက်အသွယ် clean ထက်အခြားနှင့်အတူကအစားထိုးရန်လိုအပ်ကတည်းကထို့နောက်လက်ပ်တော့ disassemble လုံးဝမလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါဟာအောက်ပါအချက်များကိုလုပ်ဖို့လုံလောက်ပါတယ်:
laptop ကိုပိတ်ထားပါနဲ့ပါဝါထောက်ပံ့ရေးကနေ disconnect ။ အဆိုပါအိမ်ရာအတွက် slot ကထဲကနေအဆင်ပြေ charger ကိုဝါယာကြိုးအဘို့ကိုယူပါ။
ထိုအခါအဖုံးဖွင့်လှစ်။ သေးငယ်တဲ့ဝက်အူလှည့သို့မဟုတ်အခြားသင့်လျော်သည့်အရာဝတ္ထုပြားကို ယူ. , ညင်ညင်သာသာကီးဘုတ်ရဲ့အစွန်း pry ။ သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက် - ထို groove ထဲကသူမ၏ရရှိရန်နှင့်ပတ်လည်အတိုင်းအတာပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးသောအထိုင်, ပျက်စီးစေပါဘူး။
ထိုနောက်မှကီးဘုတ်အောက်မှာကြည့်ပါ။ ဒါဟာ pin ကိုဖဲကြိုး cable ကိုချိုးဖျက်ဖို့ဖွယ်ရှိသည်အတိုင်းဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကိုယျ့ကိုယျကိုအပေါ်ခက်ခဲကြောင့်ဆွဲထုတ်ကြပါဘူး။ သငျသညျညင်ညင်သာသာက disable ရမည်ဖြစ်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, ပလတ်စတစ် mount ကိုချီ။
အနည်းငယ် touchpad ကိုအထက်ကီးဘုတ်လက်အောက်တွင်, သင်ကအလားတူထွက်လာသည့်အပူရှိန်ကိုတွေ့မြင်ပေမယ့်အများကြီးသေးငယ်ပါလိမ့်မယ်။ သူ touchpad ကိုချိတ်ဆက်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ အလားတူပင်မိမိအ disconnect ။
ကိုယ်ကသာမိမိကိုမိမိကွင်းဆက်ကိုရှင်းလင်းခြင်းနှင့်ဖုန်များနှင့်ဖုန်မှုန့်ကနေ connector ကိုချိတ်ဆက်ဖို့နေဆဲဖြစ်သည်။ သင်အဆက်အသွယ်တည်ရှိနေနိုင်သော်လည်းအောက်စီဂျင်ကွောငျးတှေ့ပါကသူတို့အပေါ်မှာအထူး tool ကိုလမ်းလျှောက်ဖို့ သာ. ကောင်း၏။ သန့်ရှင်းရေးပြီးစီးအပေါ်သို့သင်ပြောင်းပြန်နိုင်ရန်အတွက်ချိတ်ဆက်ဖို့လိုပါတယ်။ ကေဘယ်ကြိုးတွေပလတ်စတစ်တံခါးကျင်ကိုပြုပြင်တာတွေများကဆွဲထားကြ၏နေကြသည်။
ကျနော်တို့အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းအချို့မှတ်စုစာအုပ်မော်ဒယ်များကတော့ touchpad ကို connectors ဝင်ရောက်ဖို့ပိုပြီး disassembly လိုအပ်သည်။ Packard ဘဲလ်, Samsung Lenovo ကနဲ့ HP: ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်, သငျသညျအောကျပါအအမှတ်တံဆိပ်ဖျက်သိမ်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုသုံးနိုင်သည်။
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့တစ်ဦးလက်တော့ပေါ်မှ touchpad ကို၏စာလိပ် function ကိုအတူပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကူညီနိုင်သည်ကိုနညျးလမျးမြား၏အတော်လေးနံပါတ်ရှိပါသည်။
ဗီဒီယို Watch: KDA - POPSTARS ft Madison Beer, GI-DLE, Jaira Burns. Official Music Video - League of Legends (အောက်တိုဘာလ 2019).